Isbedel Sameyn - Daryeel Magazine
Qormadeenan waxaan si kooban uga hadalnay: waa maxay isbel sameyn ? Diintu maxay ka tiri arinkaas? maxaa keena isbedel? Nuucyaddiisa? Waa maxay caqabadaha lagala kulmo isbedel isku sameynta? Sideese isbedel la iskugu sameeyaa? Waa maxay waxa kugu kaalmeynaya in aad isbedel sameysid. Isku daygaan aan sameeyey ee ku aadan sida aan ugu faa’iideyn lahaa qofkasta oo jecel inuu Is-hormariyo, ayaan qoraaladeena xiga anagoo kusii dhameystiri doona qeybaha kale ee mawduucaan ayaan manta intaas ku ekeynaynaa. Wixii sixid qaladaad, tusaaleyn ama talo ahba adoo mahadsan fadlan iigu soo gudbi cinwaanadeydan hoose.
Change: Sidee qofku is-bedel u sameyn karaa? Sidee Loola Dhaqmaa Caruurta Madaxa Adag? Psychologists waxay yiraahdeen… Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb